नेपालीहरुले भारतको नयाँ नक्साको कडा बिरोध गरेकै बेला : पाकिस्तानले पनि दियो कडा चेतावनी ! – Life Nepali
नेपालीहरुले भारतको नयाँ नक्साको कडा बिरोध गरेकै बेला : पाकिस्तानले पनि दियो कडा चेतावनी !
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा विरोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।
पाकिस्तानले भारतको सो कदमप्रति कडा आ’पत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नक्सा ‘त्रुटिपूर्ण’ र कानुनी रुपमा ‘अपुष्ट’ रहेको जिकिर गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सुरषा परिषदको प्रासंगिक प्रस्तावको वि’रुद्ध हुने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई पाकिस्तानले अ’स्वीकार गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भारतको राजनीतिक मानचित्रलाई पाकिस्तान खारेज गर्दछ’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नक्सा अनुरुप भारतको नक्सा नरहेको पाकिस्तानको भनाइ थियो । ‘भारतको कुनै पनि कदमले जम्मु र कश्मीरको विवादित स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता प्रदान गरेको छ,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
Previous मिडियाले धनीका अपराध दबाउँछन्, गरीबका अपराध उचाल्छन् : कार्ल मार्क्स
Next भारतले भन्योःनयाँ नक्सा ठिक छ नेपाली भूमी च’लाएका छैनौँ